ခွဲစိတ်ပြုပြင်ဖို့အတွက် ကြောက်စိတ်ကြီးတယ်လို့ပြောပြခဲ့တဲ့ ခင်သဇင်
20 Jul 2018 . 5:43 PM
ခပ်ချေချေတေးစီးရီး ထွက်ရှိထားသလို ဇာတ်ကားတွေကိုလည်း ဆက်တိုက်ဆိုသလိုရိုက်ကူးနေရတဲ့ ခင်သဇင်နဲ့ ခဏတာတွေ့ဆုံခဲ့စဉ်က မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့တာလေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ခင်သဇင်ရဲ့  လတ်တလောလှုပ်ရှားမှုတွေ
လတ်တလောမှာ ဇင်ကားရိုက်ဝင်ဖြစ်တယ်။ မမို့နဲ့ ရိုက်နေတဲ့ဇာတ်ကားလည်း ရှိတယ် ကြီးမြတ်သောမာတာဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးအဲ့ထဲမှာ ကိုယ်က ခပ်ဆိုးဆိုးကောင်မလေးပေါ့နော်။ ဒီဟာပြီးရင် နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကိုလည်း လက်ခံထားပါတယ်။
တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကာရိုက်တာမတူတာလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးရိုက်ရတာကို သဘောကျတာပါ။ ဇနီးချောများကွန်ရက်ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားထဲမှာလည်း ထက်မြတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအနေနဲ့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ကာရိုက်တာအစုံကို သရုပ်ဆောင်ချင်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ အပြင်မှာ ရှိတဲ့ သဇင့်ရဲ့ ကာရိုက်တာနဲ့တူတဲ့ ဟာကို သရုပ်မဆောင်ချင်ဘူး။ ကွဲထွက်နေတဲ့ ကာရိုက်တာမျိုးကိုပဲ သဇင်ရိုက်ချင်ပါတယ်လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ချင်တဲ့ အပိုင်းရှိပါသလား?
အကုန်ပြင်ချင်ပါတယ်။ လှချင်တာကိုနော့် လှချင်တော့အကုန်ပြင်ချင်တယ် နောက်ပြင်လည်းမပြင်ရဲဘူးပေါ့နော်။ ပြင်နိုင်ရင်တော့ ကောင်းတယ်ကိုယ်ကလည်းဒီအလုပ်နဲ့လုပ်နေတာဆိုတော့လေ။ ကိုယ်ကသာမန်မိန်းကလေး ဆိုရင်တော့မလိုအပ်ပါဘူး။ ပြင်ချင်လည်းပြင် မပြင်ချင်လည်းမပြင်ဘူးပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့်ဒီအလုပ်နဲ့လုပ်နေသူတွေ အတွက်တော့ လိုအပ်တာပေါ့နော်။
သူများထက်ပိုလှနေရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့နော်လို့လည်း ခင်သဇင်ကပြောပါတယ်။ ပြင်ဖို့စိတ်ကူးရှိတယ် ဒါပေမယ့်သဇင်ကကြမ်းတယ် အိပ်ပြီဆိုရင်လည်း အရမ်းကြီးစောင်းအ်ိပ်တတ်တယ်။ အဲ့ကြောင့်ပြင်ပြီးမှ နှာခေါင်းကြီးစောင်းသွားမှာကိုလည်း ကြောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ မျက်ရစ်တွေဘာတွေခွဲတယ်ဆိုရင်လည်း အညှော်တွေဘာတွေကိုရှောင်ရကောင်းမှန်းလည်း မသိဘူး။ တော်ကြာခွဲပြီးမှ အညှော်မိလို့ယောင်ကိုင်းပြီးကိုယ့်အလုပ်တွေ ပျက်မှာကိုလည်း ကြောက်တယ်။
ဟိုတလောက အံဆုံးနုတ်တာတောင်မှ ၂ ပတ်လောက်အရမ်းနာတာ မျက်ရည်တောင်ကျတယ် ဆိုတော့လေ။ သွားလေးနုတ်တာတောင်ဒီလောက်နာနေရင် ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းနာ မှာပေါ့နော်။ အဓိကကတော့ကြောက်စိတ် အရမ်းကြီးတယ် အဲ့ဒါနဲ့ ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ပဲ ရှိသလောက်လေးနဲ့ပဲ ကျေနပ်ပြီးနေရတယ်လို့ ခင်သဇင်ကပြောပြခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit;Khin Thazin Facebook
ခှဲစိတျပွုပွငျဖို့အတှကျ ကွောကျစိတျကွီးတယျလို့ပွောပွခဲ့တဲ့ ခငျသဇငျ
ခပျခခြေတြေေးစီးရီး ထှကျရှိထားသလို ဇာတျကားတှကေိုလညျး ဆကျတိုကျဆိုသလိုရိုကျကူးနရေတဲ့ ခငျသဇငျနဲ့ ခဏတာတှဆေုံ့ခဲ့စဉျက မေးမွနျးဖွဈခဲ့တာလေးတှကေို ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
လတျတလောမှာ ဇငျကားရိုကျဝငျဖွဈတယျ။ မမို့နဲ့ ရိုကျနတေဲ့ဇာတျကားလညျး ရှိတယျ ကွီးမွတျသောမာတာဆိုတဲ့ ဇာတျကားလေးအဲ့ထဲမှာ ကိုယျက ခပျဆိုးဆိုးကောငျမလေးပေါ့နျော။ ဒီဟာပွီးရငျ နောကျထပျဇာတျလမျးတှဲတှကေိုလညျး လကျခံထားပါတယျ။
တဈခုနဲ့တဈခု ကာရိုကျတာမတူတာလေးတှကေိုရှေးခယျြပွီးရိုကျရတာကို သဘောကတြာပါ။ ဇနီးခြောမြားကှနျရကျဆိုတဲ့ ဇာတျကားထဲမှာလညျး ထကျမွတျတဲ့ အမြိုးသမီးတဈဦးအနနေဲ့ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ။ ကာရိုကျတာအစုံကို သရုပျဆောငျခငျြပါတယျ။ အဓိကကတော့ အပွငျမှာ ရှိတဲ့ သဇငျ့ရဲ့ကာရိုကျတာနဲ့တူတဲ့ ဟာကို သရုပျမဆောငျခငျြဘူး။ ကှဲထှကျနတေဲ့ ကာရိုကျတာမြိုးကိုပဲ သဇငျရိုကျခငျြပါတယျလို့ ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
ခန်ဓာကိုယျမှာ ခှဲစိတျပွုပွငျခငျြတဲ့ အပိုငျးရှိပါသလား?
အကုနျပွငျခငျြပါတယျ။ လှခငျြတာကိုနေျာ့ လှခငျြတော့အကုနျပွငျခငျြတယျ နောကျပွငျလညျးမပွငျရဲဘူးပေါ့နျော။ ပွငျနိုငျရငျတော့ ကောငျးတယျကိုယျကလညျးဒီအလုပျနဲ့လုပျနတောဆိုတော့လေ။ ကိုယျကသာမနျမိနျးကလေး ဆိုရငျတော့မလိုအပျပါဘူး။ ပွငျခငျြလညျးပွငျ မပွငျခငျြလညျးမပွငျဘူးပေါ့နျော။ ဒါပမေယျ့ဒီအလုပျနဲ့လုပျနသေူတှေ အတှကျတော့ လိုအပျတာပေါ့နျော။
သူမြားထကျပိုလှနရေငျတော့ ကောငျးတာပေါ့နျောလို့လညျး ခငျသဇငျကပွောပါတယျ။ ပွငျဖို့စိတျကူးရှိတယျ ဒါပမေယျ့သဇငျကကွမျးတယျ အိပျပွီဆိုရငျလညျး အရမျးကွီးစောငျးအိပျတတျတယျ။ အဲ့ကွောငျ့ပွငျပွီးမှ နှာခေါငျးကွီးစောငျးသှားမှာကိုလညျး ကွောကျတယျလို့ပွောပါတယျ။ နောကျပွီးတော့ မကျြရဈတှဘောတှခှေဲတယျဆိုရငျလညျး အညှျောတှဘောတှကေိုရှောငျရကောငျးမှနျးလညျး မသိဘူး။ တျောကွာခှဲပွီးမှ အညှျောမိလို့ယောငျကိုငျးပွီးကိုယျ့အလုပျတှေ ပကျြမှာကိုလညျး ကွောကျတယျ။
ဟိုတလောက အံဆုံးနုတျတာတောငျမှ ၂ ပတျလောကျအရမျးနာတာ မကျြရညျတောငျကတြယျ ဆိုတော့လေ။ သှားလေးနုတျတာတောငျဒီလောကျနာနရေငျ ကနျြတဲ့ဟာတှလေညျးနာ မှာပေါ့နျော။ အဓိကကတော့ကွောကျစိတျ အရမျးကွီးတယျ အဲ့ဒါနဲ့ ကိုယျ့ဟာနဲ့ကိုယျပဲ ရှိသလောကျလေးနဲ့ပဲ ကနြေပျပွီးနရေတယျလို့ ခငျသဇငျကပွောပွခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။